Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: February 2017
Walhubachuufi Ilaalcha Gaarii Waliif Qabaachuu ( Understanding and Positive Thoughts)
Walhubachuufi Ilaalcha Gaarii Waliif Qabaachuu( Understanding and Positive Thoughts)
( Hiwi - Elona irraa)
Hayyoota Xiinsammuu Keessaa tokko kan ta'e Steevan Kooveey Yaada namootaa guutumaan guututti hubachuu yoo barbaadde dursii qalbii guutudhaan dhageeffadhu, maal akka jechuu barbaadan, sababa maalitiif waanta jechuu barbaadan sana akka jedhan gadi fageenyaan hubadhu. Kuni waan baay'ee murteessaa hundi keenyayyuu irraa barachuu qabnu natti fakkaata.
Akka ilaalcha kootitti tokkoon tokkoon keenya kallattii kanaan of ilaaluutu nurra jiraata. Qaroomina ilaalchaa horannee, ilaalcha gaarii ( positive thought) of keessatti dagaagsuu qabna. Osoo hammuma fedhe yaadafi ilaalchi namaa kan nutti hadhaawus ta'ee hamma dandeenyen karaa gaaridhaan hubachuudhaaf ifaajuu qabna. Kuni hawaasa keenna dagaagsufi tumsa waliif goonu cimsuu keessatti faaydaa guddaa qaba.
Yaada/ barreeffama namni tokko dhiyeessu mata duree isaa qofa ilaalun jibbuun/ akka hin barbaachifneen qeequn yookin immoo haasaa namni tokko taasisu osoo sirritti dhageeffannee hin xumurin eenyummaa nama sanaa qofa ilaallee yaada hin barbaachisne kennuun dogongora guddaadha. Kana jechuun kennaa namni namaaf kenne tokko osoodhuma hin banin jaalachuu/ jibbuudhaan walfakkaata. Kennaan namni namaaf kennu tokko tokko uwwifni isaa bareedee keessi fokkachuun ni mala tokko tokko immoo uwwifni gubbaa isaa fokkatee keessi isaa garmalee bareedun ni mala. Kanaafuu hanga dandeenyen walhubachuudhaaf waldhageeffachuu, wal ijaarudhaaf onnachuufi kanaaf immoo eddoo hundattiifi yeroo hundatti facaasun baay'ee barbaachisaadha. Kuni qaroomina duraan qabnu daran nuuf cimsa, aadaafi safuu saba keenyaa eegaa akka tarkaanfannuuf nu tajaajila.
Ani akka dhuunfaa kootti yaadni ani dhiyeessu kamiyyuu sirriidha ilaalcha jedhu hin qabu. Hamma danda'een, akkaataa natti fakkaaten jaalalli, kabajaanifi waliigalteen uummata keenyaa akka cimuuf waan gaarii natti fakkaate nan barreessa. Dogongoran qabu yoo kan naaf eertanis ta'e haalduree tokkoon maletti sirreessee of fooyyessuudhaaf yoomiyyuu qophiidha. Kana kanin jedhuuf immoo afaanin haasa'uuf qofa osoo hin ta'in yoomiyyuu taanan uummata koo irraa amantaa guddaaa waanin qabuufi.
Posted by Hasan Ismail at 9:06 AM No comments:
Feyisa Lilesa, who has not been back to Ethiopia since his protest at the marathon finish in the Rio Olympics last August, on a training run in Sedona, Ariz., not far from his new home in Flagstaff.
Lilesa’s gesture as he finished second in the Olympic marathon was made to protest Ethiopia’s treatment of his ethnic group, the Oromo people.
After the Olympics, Lilesa was not certain he would see his family again. But on Valentine’s Day, they flew to Miami to join him.
Lilesa with his wife, Iftu Mulisa, and their children, Sora, 3, and Soko, 5. “I’m relieved and very happy that my family is with me,” he said.
Posted by Hasan Ismail at 4:04 PM No comments:
"Breaking News: Guraandhala 22/2017 Obbo Diriirsaa Qajeelaa Keeniyaa Nairoobii Keessatti Walta'insa humnoota Tikaa Wayyaanee fi Poolisootaa Keeniyaan uukkanfamuun gabaafame.
Mootummaa fashistii Wayyaaneetiin bara 2015 yeroo hayyuun Oromoo Jaal Abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyoo Keeniyaa Naayiroobii keessa ukkaanfaman Jaal Diriirsaa Qajeelaa nama sadarkaa 2ffaa irraatti obboo Abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyootti aanee ukkamsuuf humnoota tikaa wayyaaneetiin hordofama kan turee ta'uun beekamaadha.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee ilmaan Oromoo dhaloota qaroo biyyaa ta'an kanneen biyyaa keessa jiruuf jireenya dhorkee jalaa miliqanii biyyoota ollaa daheeffatanii jiraataan humnoota tikaa isaa fi dinagdee guddaa ramaduun adamsee ukkamsuun hidhuu, biyyatti deebisee ajjeesuu fi hiraarsa ilma namaaf hin malle irratti rawwachuun kan beekamu guyyaa kaleessa Jaal Diriirsaa Qajeelaa (Waaqjiraa) humnoota poolisii Keeniyaa waliin walta'uun kan ukkaamsee Keeniyaa Nayiroobii keessatti hidhamuun hiraarfamaa jiraachuu maddeen Qeerroo Nayiroobii irraa gabaasan. Jaal Diriirsaa Qajeelaa nama kabajamuu mirga dhala namaa fi dimookiraasiif falmuu fi dhiittaa mirga uummata Oromoo irratti mootummaan abbaa irree Wayyaanee rawwachaa jiruuf bilisummaa uummata Oromoof nama falmu ta'uu isaan yeroo biyya keessa jiruutti keessattuu baroota 2006 yeroo Yuunıbarsitii Maqalee barachaa turetti hidhaa fi hiraarsii guddaan sababaa Oromummaa isaa qofaan kan irratti rawwatama turee fi sana duraas gaaffii barattoota Oromoo adda durummaan qindeessuu fi gaggeessuu keessatti qooda guddaa qabda jedhamuun nama hiraarsii guddaan irratti rawwatama ture ta'uun beekamaadha. nama hiraarsaa ulfaataa wayyaanee jala miliqee biyya ollaa Keeniyaa Naayiroobiitti daheeffatee jiruu yeroo garaa garaatti mootummaan abbaa irree wayyaaneen doorsifamaa fi adamfamaa kan ture, yoo ta'uu;
Haala kanaan yeroo amma kanattis Jaal Diriirsaa Qajeelaa ukkanfamee waan jiruuf uummatni Oromoo fi beektootni Oromoo bakka jirtan cufatti gara dhaabbilee mirgoota namummaa Africaa fi addunyaatti iyyachuufi dirmanna hatattamaa gochuufiin atattamaan akka hiikamuuf dhiibbaan barbaachisaan akka godhamu jechuun Qeerroon dhaamsa ilmaan Oromoo hundaaf dabarsera.
Injifannoon Uummata Oromoof!!"
Posted by Hasan Ismail at 2:28 PM No comments:
Alii Muussaa kan jedhamu, miseensa dargii fi ajajaa kumaa kan ture
Alii Muussaa kan jedhamu, miseensa dargii fi ajajaa kumaa kan ture-
kan nama ajjeesuun beekkamu, gara Baalee ergamee, namoonni Haaji Aadam Saaddoo hin feene, isatu biyya shaffachiisaa jira jedhaniinii Alii Muussaanis akka H/Aadam Saaddoo barbaadanii fidan ajaja kenne. H/ Aadamis akka barbaadamaa jiru dhagahe. Namoonni baayyeen akka H/Aadam biyya gadi dhiisan gorsanillee deebiin isaa “Ani nama biyyaaf ummata kiyyarraa baqatu miti!” jechuun didanii guyyaa sadi bulanii afreessootti uffata gaarii uffatanii ajajaa kumaa nama ajjeesuun beekkamu Ali Muussaa biiroo isaaniitti itti seenan. Akka armaan gadiitti waliin dubbatan.
H/Aadam Saaddoo: Na barbaadda jedhanii, maaliif na barbaadde?
Alii Muussaa: Ati eennu?
H/Aadam Saaddoo: Ani Haaji Aadam Saaddooti.
Alii Muussaa: Maaliif haga ammaa turte?
H/Aadam Saaddoo: Ati nama ajjeesuun beekkamtaa, sibira dhufuun dura qophaahuuf ture.
Alii Muussaa: Maal qophaahaa turte?
H/Aadam Saaddoo: wanni ani qophaahaa ture,
Guyyaa duraa:- yoo kan du’u tahe jedhee sadaqaa godhe.
Guyyaa lammeessaa:- Ilmaan tiyyaaf waan qabu addaan qoode.
Guyyaa Sadeessoo:- Heexoo dhugee of qulqulleesse.
Guyyaa Afreessoo:- Kunoo sibira dhufee waan na feeteef natti himi!
Alii Muussaa: (gootummaa isaa ajaa’ibee )Eennutu Aliin nama ajjeesa siin jedhe?
H/Aadam Saaddoo: Haga ammaa siin walitti dhufee eennutu lubbuun deebi’ee beeka?
Alii Muussaa: Takkaa yaadee goota akka keetii argee hin beeku. Nama dhugaa tahuu kee hubadhe. Nama akka keetii nin kabaja, ittiin boona warra akkas siin jedhantu kijibaa. Amma nagayaan galii, yoo rakkoon jiraatte na bira koottu biiroon kiyya siif banaadha.
Maddi: Waan Garaa Nu Baate... Muussaa H/ Aadam Saaddootiin
Gummii Hooggansa Oromoo Lammaffaa; Ilaalchafi Dhaamsa Mataa Kootii
Gumiin Hooggansa Oromoo marsaa tokkoffaa jalqabaafi dhumni isaas uummata keenya biratti /bukkeetti miira garagaraatiin goolabame. Qeeqa Aktiivistoonni Oromoo garagaraa kaasaniin qalbiin uummata keenyaa yeroofis ta’u gaaga’amus walgahichi gaggeeffameera. Gumiin cufaadhaan guyyoota sadihiif gaggeeffamee dhumarratti uummataaf banaa ta’e akkaataan goolaba isaa kan nama hunda gammachise jennee yaadnee turre. Haa ta’u malee akkuma gumiin goolabameen gareen gumicha akka malee qeequfi gatii dhabsiisuf yaalii guddaa godhe tokko as baye. Kunis uummata biratti miira biraa uume. Walumaagalatti gumiin marsaa tokkoffaa Uummata Oromoo Diyaaspooraa jiru kan kallattii garagaraatiin haala faffaca’een qabsoo gaggeessaa ture walitti fiduu danda’us guutumaan guututti uummata keenya biratti hubannoo gahaafii miira walfakkaataadhaan kan xumurameedha jechuun waan danda’amu natti hin fakkaatu.
Kanumarraan kan ka’e qindeessitoonni gumichaa dhimmoota gaafii kaasisan tokko tokko irratti deebii laatanii turan. Deebii yeroo sana laataman keessaa inni tokko Gumiin inni jalqabaa Uummata Oromoof carraa walitti dhufuutiif kan karra saaqe malee riqicha qabsoofi qabsaawota Oromoo jidduu jiru guutumaan guututti ijaaranii xumuruuf kan itti karoorfame akka hin taane ibsanii turan. Sababa kanaafis Gumiin Marsaa lammaffaa akka gaggeeffamu waadaan galamee ture. Akkuma qindeessitoonni sagantichaa waadaa galan, Gumiin Hoggansa Oromoo marsaan Lammaffaa Bitootessa 10 - 12 ( March 10 - 12th) Biyya Ameerikaa Magaalaa teessoo mootummaa Ameerikaa kan taate Waashingtan DCtti akka gaggeefamu ibsameera. Gumii kanarratti namoonni hirmaannaa akka godhaniifis xalayaan affeerraa bittinnaaweera. Namoonni dhuunfaadhaan hirmaachuu barbaadanifis balballi saaqameera. Walumaagalatti, yoo jidduu kana wanti biraa hin uuumamin gumiin hoggansa Oromoo marsaa lammaffaa akkaataa karoorfameen kan gaggeeffamu ta’a jechuudha.
Anis akka dhuunfaa kootti akkuma gumii marsaa tokkoffaa irratti yaada koo ibsachuuf yaale ammas uummata koof, hoggantoota dhaabbilee siivikiifi hawaasummaa garagaraaf, dhaabbilee siyaasaa Oromootiifi qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf dhaamsafi ilaalcha mataa kootii dabarsuun barbaada. Kaayyon barreeffama kanaatis Lammiin Oromoo itti gaafatamummaan ( Responsibility) itti dhaga’amu kamiyyuu gumii kanarratti akka hirmaatufi tokkummaa Oromootiif tumsa barbaachisu godhuudhaan irreen saba keenyaa akka cimuuf dhaammachuudha.
Akkuma hundi keenya beeknutti Qabsoon Uummata Oromoo har’a hin eegalamne, har’as hin xumuramu. Qabsoon waggoota shantamaan dura bifa qindaawaadhaan eegalame akka fiigicha gareenii ( Relay Run) dhalootni tokko dhaloota biroo irraa fuudhee gahee dhuunfaa isaa bahatee isa itti aanutti kan dabarsuudha. Akkuma dhalootni tokko waan isarraa eegamu hunda qabsoodhaaf gumaachee dabreen dhalootni biroos harkaa fuudhee kan itti aanutti dabarsa. Jalleen qaqqaalin keenya qabsoo bilisummaa eegalan haala eenyummaa isaanii ifatti baasanii dubbachuuf itti qaanfatan, haala afaan ofiitiin dubbachuudhaaf sodaatan, aadaa ofii ibsachuudhaaf itti dhoorkamanii ukkkaamaman keessatti ture. Sirni bulchiinsaa keessatti qabsoo eegalanis sirna dhiiga ilmoo namaa akka silmii dhuguuf ija babaasee saa’aa 24 too’annaa cimaa gaggeessaa ture keessatti. Sana biras dabree qabsoon isaan gaggeessaa turan gammoojii hamaa beelaafi dheebun isaan hiraarsee, hedduu isaanii karaatti nyaatee hambise keessatti ture.
Eeyyen dhaloonni kaleessaa sun gufuu hammana hin jedhamne keessa dabreet haala amma irra jirru kanarraan nu gahe. Har’a hundi keenya sadarkaa kamirra akka jiru ni beekna. Har’i yeroo waa’ee afaan, aadaa, eenyummaa keenyaa akka kaleessaa itti cinqamnu keessa hin jirru. Amma yeroon kan hiree ofii mataa ofiin murteeffachuuti; mirga dhimma ofii irratti murteeffachuudhaaf aangoo qabaachuti.
Mootummaan ADWUI/ ABUT ( EPRDF/TPLF) waggoota 25nan dabraniif uummanni Oromoo waadaa sobaatiin sobamee, shira hamaadhaan qabsoon isaa laaffatee guutumaan guututti harka isaa maratee sirnicha jalatti akka gabraatti akka buluuf wanti hin godhamin hin turre. Jaarsi tuffatamee, beekaan hidhamee, tumamee, ajjeefamee eddoo hin beekamnetti awwaalamee, jaartin sarbamtee, shamarri gudeedamtee gidiraan hammana hin jedhamne irra gahaa ture. Qabeenyi isaa haala tarsiimawaa ( strategic) ta’een saamamee, gurguramee, qotee bulaan keenya osoo ijji isaa imimmaan dhangalaasu lafa isaa irraa dhiitamee, manni isaa doozaraan diigamee jireenya gadadoo keessa akka jiraatu itti murtaa’e. Haata’u malee hamileefi kutannoon uummata keenyaa akka sirnichi yaade cabee hin hafne, qabsoon isaas hin fashaloofne.
Dhalootni Oromoo har’aa ( dhalootni qubee) yeroo qabsoon waan qabbanoofte fakkaattee turte bifa haarawaan waggoota muraasa dabran keessatti eegalamte, tasumaa Mootummaa wayyaaneetiif waan yaadame hin turre. Yeroo qabsoon eegalus waan hammas hunda bal’atee eddoo hunda waliin ga’u itti hin fakkaanne. Haa ta’u malee yeroo gabaabaa keessatti qabsoon Uummata Oromoo waan qabataniifi gadi lakkisan isaan wallalchise. Ofitti amanamummaan qawweefi dinagdee harkaa qabanis isaan hin fayyadane. Osoo ijji isaanii argitu, qeerroon dheebun bilisummaa keessoo isaa balballeessee Invastmantii dharaa lafa Oromoo irratti ijaarame daaraa godhan, Maastar Pilaanii dharaa Uummata Oromoo handhuura isaa irraa buqqisuuf xaxame onnee guutun dura dhaabbatee eddoodhuma ka’etti hambise, Oftuultummaafi nu malee kan biraa hin jirtuu isaanii duwwaatti hambise. Kuni seenaa qabsoo biyyattii keessattis waggoota shantamaa ol keessatti taatoo addaa ( Unique Struggle for Freedom) ta’uudhaan galmeeffame. Yeroo Adduunyaan guutuun gurraafi qalbiidhaan sagantaa Olompiikii guddaa daawwataa turtettis yaadannoon addaa Sagantaa Olompiikii sanarraa qabatanii galanis Qabsoo Oromoo ture. Torbee tokko keessattis yoo xinnaate Miidiyaalen lakkaawamanii fixuun hin danda’amne waa’ee Uummata Oromoofi qabsoo bilisummaaf gaggeessaa jiruu hubachuu danda’an. Kuni taatoo waggoota muraasaa, yaadannoo barabaraa qeerron Oromoo diina isaa irratti galmeessiseedha.
Injifannoon kuni hundi garuu ammas taanan hin goolabamne, daandin bilisummaaf irra adeemaa jirru galma isaa hin geenye. Qabsoon kun har’as Irreef gurmuu isa deeggaru, qaama kunoo anatu siin deema jedhee qabatamaan, hojii ifatti mul’atuun isa sochoosu eeggachaa jira. Kanaaf immoo akkuma kaleessa qalbii guutudhaan eeggachaa ture, hayyuun, luubni, sheekni, abbaan gadaafi dhaabbileen siyaasaa Oromoo maalumatti nuuf jiru yaadni jedhu qalbii tokkoon tokkoo Oromoo keessa faffaca’aa jira. Ilkee wayyaanee garmalee socho’ee kaballaa takka qofa eeggatuuf qaamni kuni baay’ee murteessadha. Har’as Uummatni Oromootifi Qeerron Oromoo isaan eeggachaa jira.
Kaayyofi Galmi sabaa eenyuyyuu oli. Eenyumtuu dhimma dhuunfaa, garee, gandaafi siyaasaa qabaatus qabaatuu baatus, tokkummaa Oromoo milkeessudhaan irreen Oromoo akka cimu godhuudhaaf dirqama qaba. Hundi keenyaa biyya keenyaaf tumsuu malee dhimma dhuunfaa keenyaa yookin ilaalcha siyaasaa keenyaa qofarratti rincicnee hafuun dogongora guddaadha. Tarsiimofi ilaalchi siyaasaa ittiin masakamtan hanguma fedhes addaan fagaatus mul’atni sabaa garuu tasumayyuu sababa kanaan gufachuu hin qabu. Qabsaa’an sabaaf malee ofiif hin qabsaa’u. Jiraadheet qabsoo sana irraa akka dhuunfaatti wanta kana argadhaa osoo hin ta’in anis du’u Biyyikoo galma sana ni dhugoomsiti moo hin dhugoomsitu yaada jedhutu nu yaaddessuu qaba. Kanammoo Uumanni Oromoo eddoo jiru hundaa isinitti lallabaa akka jiru ni wallaaltu jedhee hin yaadu.
Walumaagalatti qaamni dhimmi ilaallatu. kan haalli mijateef kamiyyuu gumii kanarratti akka argamuuf amaanaa guddaa dabarsuun barbaada. Eenyumtuu maandhee keessatti gaadi’ame keessaa ba’ee, tumsa tokkummaa keessatti dheeratee akka mul’atuuf dhaamsa keenya dabarsina. Akka Doonaald Waltersin jedhe ‘ Leadership is an Opportunity to serve. It is not an Opportunity to trumpet call to self importance.’ - Hoggansi carraa Uummata Ofii tajaajiluuf fayyadu malee kan caluma jedhanii maqaa hoggansaa ittiin argatan qofaa miti. Kanumaafuu, hundumti keenyaa dhimma sammuu keenya xaxee, qabsoo sabaa duubatti harkisu keessaa baanee, qaamafi qalbii abjuu bilisummaa arguuf onnatee ka’en gumii kana mirkaneessinee tokkummaa qabsoo abaa haa dhugoomsinuun dhaamsa kooti. Gumiin kunis gumii milkii, kan gammachuu, kan waligalteef jaalalaa akka nuuf ta’u hawwii kooti.
Posted by Hasan Ismail at 5:42 PM No comments:
Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir'isuun hin dandayamu.
(Jawar Mohamamd irraa)
Posted by Hasan Ismail at 5:07 AM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 3:56 PM No comments:
Mudannoon weerara maqaa liyyuu polisiin murnii gabroofattuu wayyaane uummata Oromoo irratti labsite-
(Dr Tsegaye Ararsaa irraa)
Mudannoon weerara maqaa liyyuu polisiin murnii gabroofattuu wayyaane uummata Oromoo irrattii karaa bahaatin weerara adeemsisaa jirtu kun seenaawwan kan bara 1977 kan wal fakkaatu. Bara saniit jaallawwan qaqqaalii wareegama qabsoo guddaan waan qabanii xuruurfatani murannoon itti seenani, loola karaa lamaan itti baname haalkan motummaa Dargii (maqaa "...sargoo gabbii Somaale Awaash gadii kutte fudhachuuf kan ijaaraman.." Kan jedhu qabsaawoota Oromorrati maxxasse) lolaa, guyyaa ammoo weerartu Somaale ( maqaa "... isaan kun motummaa Dargiitu hidhachisee nuttii bobbaase..." qabsaawoota Oromoo irratti maxxansse) lolaa injifannoo guddaa galmessuun , injifannoon baatiwwani fi bara San keessatti goonfataman Oromoo kallattii hunda irraa walqodiinsa tokko malee akka sabaat tokkummaaf bu'ura ta'e dha.
Bara sana dhaaba umurii kichu gargaarsa alaa tokko malee ofiit hirkannoon tarkaanfachaa ture . Oloolli dinnii qabsaawoota bilisummaa Oromo irratti amantaan walqabate kan dinaan ofame dhaaba sana balaa guddaa keessa kan buse ture. Oloollii ofamaa tures Oromoota kutaale Oromiyaa adda addaa irraa qabsoo kana utubuf kan qabsoo kanattii makaman fi qabsaawoota kan biroo giddut amantaan walqabate shakkii umun ilmaan abbaa tokko kan gargar facaaase ture. Inniis ".. Haarargen Islaama..., Oromoota amantaa addaa (phenxee,kiristaana) qaban qabsoo kanattii makaman amantaa Islaama balleessuf dhufan...,..." kan jedhu akka ture dha. Garu bara saniit kaan abdii kute qayeet deebi'u, diinattii haarka keennachu fi biyya hambaat baqachun qabsoo sana gadii haalakiisanii malee , qabsaawotni qabsoo kanattii ciichanii haafan dhaaba sana deebisanii lubbuu ittii horun abdii qabsaawoota ummata bal'aa Oromoo hunde goodhate akka qabsoon kun ummatni kankooti jedhe kunuunfate akka abbaa ittii ta'uf wareegama qaali baasun amaanaa guddaan dhaalchiisan. Umatnis amaanaa sani tole jedhe fudhate waanqabu hunda odoo irraa hin qusatin haanga lubbu,jireenya maati ofii ittii wareege injifannoon, dheebu bara dheeraa dhugoomsun dawoo dinaa cabsun , yeroo gabaabduf hataatu malee Oromoon martti kanaan durra kan wal hin beeknelle Finfinneet akka wal argan walbaran kan dandeessise ture. Ammas kan argaa jirruu haaqa dhugaa ganamaa kana , ummatnii ittii ciichee goolee Oromiyaa guutut ofiin ofijaare qabsoo dhaale sani amaanaa guutuun qabatamaan mul'isaa jira. Carraa argate hundaan fayyadamees wal iyyaafachaa yaada wal jijjiiraa wal utubaa mataa waliit qabate akka jiru miirkana. Dhaaboolin ummata Oromoof dhaabbane kan jedhan hundii tokkummaan as akka bahaan qabsoo kana cinaa akka hiriiran waamiicha haanga wareegama dhiigaa goola Oromiyaa guutuut taasisen addaan ciita tokko malee dabrsaa jira.
"Kanaaf carraa guddaa ummatni keennefi kana fayyadamun,dhaaboliin Oromoof dhaabbatan marti fakkeenyummaa ummata kana fudhachuun mataa isani bakka tokkot waliit qabachu akka qaban akeekaa, dhaabnii guddaan sun deebi'e goola Oromiyaa guutuu, maatifi qayeen Oromoo tokko odoo hin hambisiin ofjalattii hammate akka ijaaramu qabu jabeessine gaafana."
Posted by Hasan Ismail at 4:48 PM No comments:
Posted by Hasan Ismail at 10:22 AM No comments: